February 2018 - Khit Minnyo
Kali February 25, 2018
Kali မှာ Teamviewer တင်နည်း 2018.1 (new)
၁. Teamviewer တင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Teamviewer ဖိုင်ကို ဒီစာကြောင်းကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူပါ။
(မှတ်ရန်မှာ Ubuntu, Debian ဆိုတဲ့ထဲက ဒေါင်းရမှာပါ။ 32bit or 64bit ကတော့ မိမိတို့ OS အလိုက် ရွေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ 64bit နဲ့ နမူနာ ပြောသွားပါမယ်။)
၂. Teamviewer ဖိုင်ဒေါင်းပြီးတဲ့အခါ ဖိုင်နာမည်ကို ရေးရ မှတ်ရ လွယ်စေဖို့ Teamviewer အတိုကောက် tv.deb လို့ပဲ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဗားရှင်းမတူရင် နောက်ဆက်တွဲ နာမည် ကွာမှာစိုးလို့ အားလုံး တူအောင် ပြင်ခိုင်းတာပါ။
၃. ပြင်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ Command များကို ကူးပြီး တစ်ကြောင်းပြီးမှ တစ်ကြောင်း ရိုက်ထည့်ပါ
root@kmn:~# dpkg --add-architecture i386
root@kmn:~# apt update
ဒီအဆင့်က နည်းနည်းကြာပါမယ်။ နောက်တစ်ကြောင်းပေါ်မှ နောက်တစ်ဆင့် ဆက်ရိုက်ထည့်ပါ။ (ကူးထည့်လည်း ရပါတယ်) root@ ကနေ # အထိတော့ ထည့်ကူးစရာ မလိုဘူးနော်။
apt install libc6:i386 libgcc1:i386 libasound2:i386 libfreetype6:i386 zlib1g:i386 libsm6:i386 libxdamage1:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libasound2:i386 libfreetype6:i386 graphicsmagick adwaita-icon-theme libgtk-3-0 libjpeg62-turbo libdbus-1-3 libexpat1 libfontconfig1 libjpeg62
(ဒီအဆင့်မှာက Package တွေ များတယ်။ apt install ကနေ libjpeg62 အထိ ကူး ထည့်လိုက်ပါ။) ပြီးရင် မကြာပါဘူး ခဏပါပဲ။ လိုင်းမကောင်းရင်တောင် ငါးမိနစ်လောက်ပါပဲ။ Yes or No Y/n မေးရင် y ရိုက်ပြီး enter လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြောင်း ပေါ်တဲ့ထိ စောင့်ပါ။
root@kmn:~# apt -f install
ရှင်းစရာလေးတွေရှိရင် ဒီအဆင့်က ရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ မရှိရင်တော့ ရှင်းမှာမဟုတ်သေးပါ။ ဒီအဆင့်လည်း မကြာပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း နောက်တစ်ကြောင်းပေါ်အောင် စောင့်ဖို့ လိုပါမယ်။
root@kmn:~/Downloads# dpkg -i tv.deb
(ဒေါင်းပြီးကတည်းက အဲသည်နာမည်ဖြစ်အောင် ပြောင်းခိုင်းထားတယ်နော်။)
ပြီးရင် menu ထဲကနေ Teamviewer ကို ရှာပြီး ဖွင့်ပါ။
ဒီအဆင့်မှာ ပွင့်မလာသေးတာ (သို့မဟုတ်) error ပြတာ မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
root@kmn:~/Downloads# apt -f install
Yes or No (Y/n) မေးရင် y ရိုက်ပြီး enter ပါ။
root@kmn:~Downloads# dpkg -i tv.deb
ဒီအဆင့် ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Teamviewer ကို ဖွင့်ပြီး သုံးလို့ ရပြီ error ကင်းပြီဖြစ်ပါတယ်။
By KhitMinnyo on February 25, 2018 No comments:
Kali Linux တင်ဖို့အတွက် installer ခွေ ပြုလုပ်နည်း
1. Kali Linux ၏ နောက်ဆုံး Version ကို ဒေါင်းယူရန် ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
ဒေါင်းပြီးသော ISO သည် error ကင်း မကင်း သိစေဖို့ VirtualBox မှာ တင်ပြီး စမ်းသင့်ပါသည်။
VirtualBoxမှာ တင်နည်းကို ကြည့်လိုပါက ⇨⇨⇨ ဒီနေရာ ⇦⇦⇦ ကို နှိပ်ပြီး သွားကြည့်နိုင်ပါသည်။
2. Power ISO ဒေါင်းယူရန် ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ။
မိမိ ကွန်ပျူတာ bit အတိုင်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။ (မိမိကွန်ပျူတာ ဘာ bit လဲ မသိပါက My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကြည့်ပါ)
3. အောက်ပါ Mov ကိုကြည့်ပြီး ခွေ လိုက်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ (အပေါ် ၂ဆင့် ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါက ခွေထဲက ပါတာတွေ ထပ်ဒေါင်းစရာ မလိုတော့ပါ)
Windows February 18, 2018
Chrome & Firefox မှာ မြန်မာစာ အမှန်မမြင်သူများအတွက် (Windows & Linux)
By KhitMinnyo on February 18, 2018 No comments:
Kali February 18, 2018